USOIL (WTI) ooVimba-Funda ukuRhweba
tag: I-USOIL (WTI)
I-USOIL (WTI) ibuyela kwi-59 yeedola, iphinde ibuyele phezulu
Inqanaba lokumelana: $ 64, $ 65, $ 66
Inqanaba lenkxaso: $ 58, $ 57, $ 56
I-USOIL ibikwintshukumo ephezulu ukusukela ngoNovemba 2020. I-oyile ekrwada ye-WTI inyukile ukusuka kwi- $ 33.67 ukuya kwi- $ 60.12 ephezulu. I-RSI ibonakalisile ukuba ixabiso leoyile ekrwada lifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Kule meko, abathengisi banokuvela batyhale amaxabiso ezantsi. Imakethi ngoku iyawa kodwa kukho ukubonakala kweziphatho zezibane. Oku kuyakubonisa ukuqala kwakhona kokuphakama.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye phezulu zibonisa imeko yangaphambili. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-70 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-USOIL ikummandla we-uptrend kwaye iyakwazi ukuphinda iqhubeke nentshukumo ephezulu.
USOIL (WTI)) Ixesha eliphakathi kwiTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso lisenyuka phezulu. Ngomhla we-15 kuFebruwari, umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba intengiso iya kuwa kwinqanaba le-1.272 ukongezwa kweFibonacci kunye nokubuyela umva. Oko kukuphezulu kwe- $ 61.89. Ixabiso liya kubuyela kwi-78.6% apho laqala khona. Isenzo sexabiso siqinisekisile la manqanaba.
I-USOIL ingaphezulu kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-oyile ekrwada ye-WTI ikwi-uptrend. Emva kokuphinda kubuyiselwe kwelinye ilizwe, i-USOIL iqale ngokutsha ngokutsha. Ukuba intengiso inyuka kwaye yaphuka ngaphezulu kwe- $ 62 ephezulu, i-uptrend iya kuqhubeka.
Qaphela: i-Learn2.Trade ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, I-USOIL (WTI)